Snapdragon 730 sy Snapdragon 665 dia mamakivaky ny mari-pahaizana AnTuTu | Androidsis
Tamin'ity herinandro ity ihany dia nanolotra ny vaovao i Qualcomm isan-karazany ny processeur ho an'ny mid-range. Anisan'ireny isika Snapdragon 665 ary koa Snapdragon 730. Mpikirakira vaovao izay tadiavin'ny orinasa amerikana hanohy hanjaka amin'ity fizarana ity amin'ny Android. Roa andro monja taorian'ny nanolorana azy dia efa nandalo AnTuTu ny roa tamin'izy ireo.
Amin'izany no ahafahantsika mahita ireo ny processeur Qualcomm vaovao dia mamela antsika amin'ny resaka fampisehoana. Amin'ity tranga ity dia Snapdragon 665 sy Snapdragon 730 no nandalo tao amin'ny tranonkala malaza. Fitsapana fampisehoana zava-dehibe, satria te hahita ny fanatsarana nampidirin'ny orinasa amin'ity sehatra ity ianao.
Ny voalohany amin'izy ireo dia nandalo ity fitsapana AnTuTu ity dia Snapdragon 730. Ilay processeur vaovao ho an'ny antonony midadasika an'ny orinasa. Amin'io lafiny io dia mamela vaovao tsara ho antsika. Raha izao no mitohy fampahafantarana fanatsarana amin'ny lafiny asa. Mahazo isa 213.113 222.538 isa, ka mihoatra ny teo alohany amin'io lafiny io. Ary ny kinova filalaovana azy dia nisy vokatra tsara. Amin'ny anao, isa XNUMX.
Amin'ny lafiny ilan'ny vola madinika dia ahitantsika ny Snapdragon 665. Ilay mpikirakira antonony vaovao, natao hanoloana ny Snapdragon 660 eny an-tsena. Fa amin'ny azy, ny fitsapana dia mamela antsika ho diso fanantenana. Hatramin'ity processeur ity tsy nahatratra ny ambaratonga andrasana, mijanona eo ambanin'ilay teo aloha mihitsy aza. Izay tsy isalasalana fa mampiahiahy.
Izy ireo dia mitovy amin'ny herin'ny CPU. Na dia tsy maintsy atao ao an-tsaina aza fa ity karazana benchmark ity dia somary manondro. Avy eo azo atao izany amin'ny fitsapana ho avy, na amin'ny asany amin'ny finday avo lenta misy valiny tsara kokoa. Fa ny fahatsapana izay mifanohitra indrindra amin'ny Snapdragon 730 sy Snapdragon 665.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatsika izay telefaona amin'ny Android Hampiasa ny iray amin'ireo Snapdragon 730 na Snapdragon 665 ireo izy ireo. Mety hanana ny angon-drakitra voalohany amin'ity lafiny ity isika afaka fotoana fohy. Manantena izahay fa hahalala tsy ho ela, satria mpikirakira roa izy ireo izay amin'ny ankapobeny dia nantsoina hanjaka amin'ity Android midadasika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Snapdragon 665 sy 730 dia mandalo AnTuTu
Inona no hatao raha tsy maneno ny telefaona Android anao rehefa miantso anao izy ireo